[OFFICIAL] dr.fone toolkit - Android Data Ukumbiwa: Buyisa Idatha evela Android Broken
dr.fone toolkit - Android Data Ukumbiwa (Zamacebo ezonakeleyo)
1 software retrieval data hlabathi izixhobo ezaphukileyo Android.
Highest izinga retrieval kolu shishino.
Buyisa iifoto, iividiyo, abafowunelwa, imiyalezo, zikhuni umnxeba, kwaye ngaphezulu.
Ihambisana kunye izixhobo Samsung Galaxy.
Sinako ukungena kwisixhobo sakho ezonakeleyo ukufumana iifayile zakho umva.
Buyisa Data ukusuka Broken Android kwiimeko ezahlukeneyo
iimeko ezahlukeneyo ziyaxhaswa, ezifana yonakele umkhusane device yakho Android ngempazamo, nesisitheliso uba abamnyama kwaye ibonisa nto kuwo, awukwazi ukungena kwinkqubo ngenxa yezizathu ezingaziwayo, ayikwazi ukuvula debug USB, bakhohlwe igama yokutshixa ikhusi, akukho impendulo nge iskrini kwebala kunye nangaphezulu.
Skena ne Imboniso for Free
Uyakwazi ukusebenzisa trial version free yale Android software recovery data eyaphukileyo ukuvavanya kunye data kuqala kwisixhobo sakho, khon 'ukuze ukwazi isigqibo nto ukuze kubuye.
Ukululama SD Card ku Android
Hayi kuphela imemori khadi yangaphakathi, le software recovery data Android kwaphulwa kukwanceda scan kwakhona i data evela ikhadi lakho SD kwi kwisixhobo eyaphukileyo.
Iifayile kulandwa izixhobo kwaphulwa Android
Uyakwazi ukurhweba ngaphandle abafowunelwa yakho CSV, iifomati HTML kwaye VCF kwikhompyutha, kulula ukusetyenziswa kamva. Ugcine imiyalezo kwisixhobo sakho baphuke Android kwifomati HTML kwi khompyutha ukufunda lula okanye ushicilelo. Iifoto, ividiyo, eziviwayo kunye nezinye iintlobo amaxwebhu, unako nokubasindisa naphi na kwi computer yakho, okoko nje unako ukufumana lula.
Sebenza Kakhulu ne Devices Android
Okwangoku, le program owaphukileyo wobuyiselo data Android usebenza ngokupheleleyo ngenxa emininzi phones Samsung nezidanga, ezifana Galaxy S series, le Galaxy Note series, njl Njengoko kwezinye iibrand bezixhobo Android, ungakhathazeki. Iya kuza kungekudala kakhulu kwixesha elizayo.
Le program owaphukileyo wobuyiselo data Android efundwayo-kuphela ngokupheleleyo software. Oku kuthi, aguqule okanye ukuvuza nayiphi na idatha kwidivaysi yakho okanye kwi ifayile elilalela. Sithatha data yakho yobuqu akhawunti nzulu. Wena sihlale njalo umntu kuphela ngubani na ukufikelela kuyo.
Gcwalisa Ukuhambelana Android
Qaphela 3, qaphela 4, qaphela 4 Edge, qaphela 5, qaphela DUOS 5, qaphela 8, Qaphela II
Hlola uluhlu lwezixhobo ezixhasiweyo >>
10 / 8.1 / 8/7 / Vista / Windows XP
Android 5.0 no bangaphambili
Buyisa Iifayili Ukusuka ...
Skena ifowuni yakho ukuba ukubuyisa data
Skena ikhadi lakho lememori ukubuyisa data
Athathe iifayile Android yakho baphuke.
Buyisa idatha yakho ezilahlekileyo noxolo lwengqondo.
Isekufumaneni naziphi into ofuna kwicebo
Akukho ukulimaza data yakho isixhobo konke
Funda-kuphela, akukho data igcinwe okanye ukuvuza
interface nokuqonda ukuba wonke umntu ayisebenzise
Zama software simahla iintsuku ezingama-30
Android Data Ukumbiwa (Zamacebo ezonakeleyo)
Mirror, isipili phezu kodonga, loyi i wamaqhawe phambili ehlabathini?
Ewe! Wondershare Dr. Uphawu nguye! Yasindisa ubomi bam (imifanekiso)! Andikwazi ndimbulela ngokwaneleyo ukuphuhlisa inkqubo omkhulu onjalo!
software recovery Android Excellent
Ndathenga oku ukuze ndikwazi ukubuyisa yonke into umama wam Samsung Galaxy Phone emva format.
I ngengozi kususwe imifanekiso ndathatha ukusuka Samsung S3 ebusuku yam yokugqibela yaye wacaphuka gqitha kuba imifanekiso aba intombi yam ilokhwe yomtshato wokuqala \_ 's zama on. Ndathandaza ukuba oku kuya kusebenza yaye kwaba njalo !! Kwathabatha ixesha elide kodwa ndiza kuyenza lonke kwakhona kwaye Ndikucebisa imveliso nabani !! Enkosi kwakhona. Mna umama sonwabe kakhulu lomtshakazi.
Indlela Buyisa uqhagamshelana nabo kuvimba wefowuni Android ne Screen Broken
2 Iindlela Ufikelele mfono Android ne Screen Broken
Indlela Buyisa imiyalezo evela Devices Android Broken
Indlela Vula Android Phone nge Screen Broken
Indlela Phone Backup Android ne Screen Broken
Indlela yokubuyisela Text Umyalezo ovela Devices Samsung Broken
Indlela Fix Bricked Android Phones kunye neepilisi
Indlela Fix Samsung Galaxy Black Screen
Indlela Fix Samsung Galaxy Death ngesiquphe: Black Screen of Death
Buyisa izakucinywa okanye ezilahlekileyo data evela izixhobo 6000+ Android.
Susa iskrini itshixiwe ukusuka izixhobo Android ngaphandle kokulahlekelwa data.
Emane ukhuphelo data yakho Android kwikhompyutha uze uyibuyisele kangangoko ufuna.